ရှေ့နောက် မညီ ပြောနေတာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒလား | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ခေါင်ကစ မိုးယိုနေတယ်လုိ့ ပြောရမယ့် အခြေအနေကို ရောက်နေပါတယ်။ “မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာ မှန်သမျှ ဖီဆန်ကြ၊” လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့-၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က မတရားသဖြင့် လူပေါင်း များစွာကို သုတ်သင်ရှင်းလင်း မောင်းထုတ်နေတဲ့ ကိစ္စ၊ လူမျိုးတစ်မျိုးကို အမျိုးသားရေး ၀ါဒီတွေက မတရားသဖြင့် စွပ်စွဲနေ တဲ့ ကိစ္စများမှာ “တော်ကြပါတော့၊” ဆိုတဲ့ မေတ္တာရပ်ခံ တားမြစ်ချက်ကလေး လောက်တောင် အသံမထွက်ဘဲ-၊ မတရား သောသူများကို ဆိတ်ဆိတ်နေ ခြင်းဖြင့် ကြောထောက်နောက်ခံပြု သဘောတူနေတယ် ဆိုတာက ကမ္ဘာက သိနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Freedom From Fear ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ- သူကိုယ်တိုင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြပြီး ဖြစ် နေပါတယ်။- စစ်အစိုးရပြောလေသမျှ ဘာပြောပြော မကောင်းမမြင်တဲ့ အချိန်က- သူဟာ လူထုကို စည်းရုံးရယူဘို့ “မတ ရားတဲ့ အမိန့်အာဏာ မှန်သ မျှ ဖီဆန်ကြ၊” လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ပြီး- ရိုဟင်ဂျာများ အပေါ် မတရားစွပ်စွဲ သုတ်သင်ရှင်းလင်းတဲ့ အချိန်မှာတော့ လူထုက မုန်းတီး အထင်လွဲသွားမှာ စိုးလို့ သူပြောခဲ့တဲ့ “မတရားသော အမိန့်အာဏာ မှန်သမျှ ဖီဆန်ကြ၊” ဆိုတဲ့ စကားကို သူကိုယ်တိုင်က မသိဟန်ဆောင်နေပါတော့တယ်–၊ ဒီတော့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးကိုယ်တိုင်က ရှေ့တစ်မျိုး- နောက်တစ်မျိုးမူကို ဦးဆောင်ကျင့်သုံးပြနေပါတော့တယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်–၊ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်၊ ဂုဏ်ယူပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်လည်း သမ္မတ တစ်ဦးရဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါနဲ့ မညီညွတ်ဘဲ- ရိုဟင်ဂျာများကို ကျူးကျော် ၀င်ရောက် လာသူများ- ဖြစ်တယ်၊ ကုလသမဂ္ဂ အကူအညီနဲ့ တတိယနိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့သွားစေဘို့ ဆောင်ရွက်ရမယ် (တိုင်းပြည်ထဲ က မောင်းထုတ်ပစ်ရမယ်) ဆိုတဲ့ စကားကို ကမ္ဘာသိ ပြောခဲ့တယ်။ ဒီလို ပြော ဆိုမှုမှာ ရိုဟင်ဂျာထဲက တစ်ချို့ဟာ ဆိုတဲ့ ချွင်းချက်စကားကို မသုံးဘဲ ရိုဟင်ဂျာအားလုံးကို ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ စကားကို ပြောခဲ့တယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ စိတ်ဓါတ်ကို ပြသလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခါ ဗွီအိုအေ နဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်ပြန်တော့– ကျွန်တော်သိသလောက် ဒီ လူတွေက ၄၈ (၁၉၄၈-) မတိုင်မှီ (လွတ်လပ်ရေး မရမှီ) က ရောက်နေတဲ့ လယ်သမားတွေပါ။ နောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့သူ မရှိ သလောက်ပါပဲ၊ ကျွန် တော်တို့ရဲ့ 82 Law အရ တတိယ မျိုးဆက်ကို နိုင်ငံသား ပေးမှာပါ၊ ဒီတော့ သူတို့ရဲ့ မြေးတွေက အခု နိုင်ငံသား ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောင်းပြန်တယ်-၊ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ဖိအားကြောင့် ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ စကား ဖြစ်ပေမယ့်- အခု အချိန်ထိ ဒီလူသားတွေကို “ဘင်္ဂါလီ” ဆိုတဲ့ အသုံးနဲ့ ထည့်သွင်းပြောဆိုနေပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာဖိအားနဲ့ တုံ့ပြန်မှုများကို ကြောက်ရွံ့နေပေမယ့်- သူကိုယ်တိုင်လည်း အခုအချိန်ထိ ရခိုင်သမိုင်းအမှန်ကို မသိသေးဘူး ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။ ဒါ ပေမယ့် သူ့စကားမှာ “ကျွန်တော်သိသလောက်” ဆိုတဲ့ စကားကို ပလ္လင်ခံထားတော့ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် သမ္မတတစ်ဦး လုပ်နေပြီး သမိုင်းကို သေချာကြေညက်စွာ မလေ့လာသေး ဘဲ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီချင်း တူနေတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက ပြောသမျှ လက်ခံထားတဲ့ နားတစ်ဘက်ဝါဒီကြီး ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ သူ့စကားများက ဖေါ်ပြနေပါတယ်။
တစ်ကယ်တမ်း ရခိုင်သမိုင်းကို လက်တွေ့ သိနေမယ် ဆိုရင်– 82 Law မကလို့ 2012 Law သတ်မှတ်ရင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ ဟာ မေယုဒေသရဲ့ မူလဇစ်မြစ် လူမျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်နေပါတယ်။ ရခိုင်ဒေသကို ဘက်မလိုက် ဖွင့် ထားသော မျက်လုံးများနဲ့ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်လေ့လာကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီ ဒေသဟာ အာရီယန် လူမျိုးနွယ်နဲ့ မွန်ဂိုလီးယား လူမျိုးနွယ် ထိပ်တိုက်ဆုံနေတဲ့ ဒေသ ဖြစ်တယ်။ ဒီမှာ အာရီယာန်တွေက နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ သမိုင်းမတင်မှီကတည်းက ရှိ နေပြီး- မွန်ဂိုလီယား အနွယ် တိဘက်မြန်မာတို့က အေဒီ ၈ ရာစု လောက်မှ ရောက်လာတာ ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်လူမျိုးထဲမှာလည်း အဲ့ဒီ လူမျိုး နှစ်စုလုံး ရှိနေသလို၊ အစ္စလာမ်သာသနာကို ကိုးကွယ်တဲ့ ရခိုင် ထဲမှာလည်း အဲ့ဒီ လူမျိုး နှစ်မျိုးလုံး ရှိနေပါတယ်။
Posted by A Muslim at
This entry was posted on January 10, 2013, in ဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဒေါ်စုစကား စဉ်းစားရာပါ ၊ ယုံကြည်မှုတော လုံ့ဝမရှိဘူး …
Plight of the Rohingyasachallenge to Suu Kyi →